eSancharpati | मंगलबार गणेश भगवानको पूजा कसरी गर्ने ? कुन मन्त्र जप्ने ? - eSancharpati मंगलबार गणेश भगवानको पूजा कसरी गर्ने ? कुन मन्त्र जप्ने ? - eSancharpati
मंगलबार गणेश भगवानको पूजा कसरी गर्ने ? कुन मन्त्र जप्ने ?
🙏 ॐ श्री गणेशाय नमः 🙏
गणेश भगवानको पूजा भनेको कुनै पनि धार्मिक कर्मको आधिकारिक सुरुवात हो । सुरुमा गणेश भगवानको पूजा नगरि अरु भगवानको पूजा गरेमा त्यो पूजा असफल हुन्छ । पूजा मात्र होइन, कुनैपनि काम वा यात्राको सुरुवात गर्दा पनि गणेश भगवानलाई सम्झिने हाम्रो धार्मिक संस्कार छ ।
त्यसैले, जस्तै ठूलो पूजाआजा वा पूराण नै किन नहोस्, हरेक धार्मिक अनुष्ठानको सुरुवात गणेश भगवानकै पूजाबाट गरिन्छ । अन्य भगवानबाट आशिर्वाद पाउन समेत पूज्नु पर्ने गणेश भगवानको किर्ती हाम्रा सबै धर्मग्रन्थहरुले यथेष्ट रुपमा बयान गरेका छन् । हामीले साताका अन्य दिनमा गर्ने धार्मिक अनुष्ठान वा अरु भगवानको आराधानाको प्रतिफल पाउन पनि मंगलबार गणेश भगवानको पूजा नगरि हुँदैन ।
मंगलबार भनेको मंगल ग्रहलाई समर्पित दिन हो । हिन्दु धर्ममा मंगल ग्रहलाई ज्ञान, बुद्धि, विवेक र आर्थिक सम्पन्नताको प्रतिकका रुपमा लिइन्छ । त्यसैले, मंगलबारको दिन भगवान गणेशको पूजा तथा आराधाना गर्नाले शुभमंगल फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
यस्तै, मंगल ग्रहलाई मानव जीवनमा आउने अनेक समस्याका निर्माता तथा कारक पनि मानिन्छ जसको असरबाट बच्नलाई पनि सो दिन शुभलाभका प्रतिक मानिने श्री गणेश भगवानको पूजा गरिएको हो । मंगलबार गणेश भगवानको पूजा गर्नाले जिन्दगीभर सुखद् फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहीआएको छ ।
मंगल ग्रहले मंगलबारको दिनको आफ्नो प्रकोपले लगाएका विभिन्न दोष मेटाउन मंगलबारका साथै बुधबार पनि गणेश भगवानको पूजा गरिन्छ । बुधबार भने व्रत बसेर पूजा गरिरहनु पर्दैन ।
मंगलबार माथि उल्लेखित विधि अनुसार पूजा गरेर बुधबार भने सामान्य विधिले पूजा गर्दा पर्याप्त हुन्छ । बुधबार सुरुमा मंगलमयको कामना गर्दै गणेश भगवानको र त्यसपछि कष्टहरणको आशिर्वाद माग्दै दुर्गा माताको पूजा गर्नुपर्दछ ।
#ganesh chaturthi #ganesh dev #ganesh puja #mangalbar